Bosch ရဲ့ယနေ့တွင်နှင့် Mobility ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်၏အနာဂတ် - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလောကဥရောပ49 ဂျာမဏီBosch ရဲ့ယနေ့တွင်နှင့် Mobility ကိုအသွင်သဏ္ဌာန်၏အနာဂတ်
08 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 49 ဂျာမဏီ, ဥရောပ, လောက, PHOTOS, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း 0
စတုဂတ်နှင့် Frankfurt, ဂျာမနီ - နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ Bosch ရဲ့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, တတ်နိုင်သမျှထုတ်လွှတ်-အခမဲ့ mobility, secure နှင့်ချစ်စရာကောင်းဖို့ကြိုးစားနေ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူ။ ကုမ္ပဏီ, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ IAA 2019, ကိုယ်ပိုင်ကွန်ယက်နှင့်လျှပ်စစ် mobility များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြေရှင်းချက်တင်ဆက်ပေးတယ်။ Bosch ရဲ့ 8 ခန်းမ, C ကို 02 ရပ်များနှင့်လည်း Agora ပြပွဲအာကာသအတွင်းရာအရပ်ကိုယူပါ။
: မြို့ပြ mobility ၏အနာဂတျအတှကျနည်းလမ်းများ - မှboschıotshuttl
လူတွေကိုကုန်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်ချင်ရှိမရှိအနာဂတျမှာ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဝန်ဆောင်မှုမောင်းသူမဲ့ယာဉ်များကျယ်ပြန့်လမ်းခရီး၌ထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်, လျှပ်စစ် powertrain မှကျေးဇူးတင်စကား, ဗဟိုမှ glided နှင့်မြို့အစွန်အဖျားချောမွေ့စွာချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Bosch ရဲ့လြှပျစစျမီး, စိတ်ကြိုက်otonomlaştırနှင့်ကွန်ယက်နည်းပညာ ချိတ်ဆက်. , ဒီမျိုးဝန်ဆောင်မှုaraçlarındayပါလိမ့်မယ်။
ဟာ့ဒ်ဝဲအဆင်သင့်ကိုယ်ထည် - Electromobility ပလက်ဖောင်း:
Electromobility အပေါငျးတို့သအုတ်မြစ်နှင့်အတူ Bosch ရဲ့လျှပ်စစ် powertrain, စတီယာရင်စနစ်များ, ဘရိတ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစုစုအတွက်ရရှိထားပါသည်။ ကိုယ်ထည်နှင့်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာအထူးကုလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များပြပွဲအားလုံးကို Bosch ရဲ့ထုတ်ကုန်အတူတကွပေါင်းစည်းနိုင်ပုံကို Benteler ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖြစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ထွက်သယ်ဆောင်။ အဖြစ်ကောင်းစွာဟာ့ဒ်ဝဲအဆင်သင့်ကိုယ်ထည်အဖြစ်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပစ္စည်းများ, Bosch ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကူညီပေးနေသည်။
ပါဝါကိုထုတ်လွှင့်အမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, လျှပ်စစ်နှင့်လောင်စာဆဲလ်kümeleri- Bosch ရဲ့နည်းပညာ
Bosch ရဲ့ဘယ် application ကို mobility အကျိုးရှိစွာနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေစေလိုသည်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာများတွင်အကျိုးရှိစွာအတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်များ, လောင်စာဆီဆဲလ်ပါဝါ aktarmaorg သူတွေကိုတော်တော်များများနှင့်လြှပျစစျမီးအဆင့်အပါအဝင်ပါဝါဂီယာအမျိုးအစားအားလုံးကိုများအတွက်ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါလောင်စာဆီ cell စနစ် - ရှည်လျားသောခရီးများအတွက် e-mobility:
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု, ဆှီဒငျ POWERCELL တောင်းဆိုမှုကိုနှင့်အတူလောင်စာဆီဆဲလ် stack ၏စီးပွားရေးအဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ် sunabiliyor.bosch ပိုမြန်ဆီဖြည့အချိန်အဖြစ်အကြိမ်မဟုတ်တော့အကွာအဝေးရှိမရှိလောင်စာဆီနှင့်အတူဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုထောက်ပံ့မိုဘိုင်းလောင်စာဆဲလ်မော်တော်ယာဉ်ကို အသုံးပြု. ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သို့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြောင်းလဲသောလောင်စာဆဲလ် stack အပြင်, Bosch ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးရဲ့နောက်အဆင့်ကိုအဘို့အဆင်သင့်အားလုံးအခြေခံ system component များကို။
48 ဗို့စနစ်များကို - အနိမ့်လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု CO2:
Bosch ရဲ့ 48-ဗို့စနစ်များ, အတွင်းပိုင်းလောင်ကျွမ်းအင်ဂျင်အထောက်အကူပြုဖို့အရန်မော်တာပေးခွငျးအားဖွငျ့အားလုံးမော်တော်ယာဉ်အတန်းများအတွက် Entry-level ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ Hybrid ။ အရှိန်စဉ်အတွင်းဒီစွမ်းအင်ကိုသုံးစွဲဖို့ braking စွမ်းအင်နှင့်ထီသိုလှောင် recycling နည်းပညာ, ။ ဒီ feature2CO15 ရာခိုင်နှုန်းတက်နေဖြင့်လောင်စာသုံးစွဲမှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Bosch ရဲ့စနစ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
high-ဗို့အားဖြေရှင်းချက် - ဟိုက်ဘရစ်နှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များပိုမိုအကွာအဝေး:
လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် plug-in ကို hybrids တွေကိုဖြစ်နိုင် mobility သုညဒေသခံထုတ်လွှတ်စေသည်။ Bosch ရဲ့ powertrain ဤအမျိုးအစားဒီဇိုင်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူများကူညီပေးနေနှင့်ထုတ်လုပ်သူများရန်လိုအပ်သောစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ E-axles, ပါဝါအီလက်ထရွန်းနစ်, လျှပ်စစ်မော်တာနဲ့ဂီယာအုံတစ်ခုတည်းယူနစ်အတွက်အတူတကွတတ်၏။ ဒီကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်ကျူးများ၏ထိရောက်မှု သာ. ကြီးမြတ်အကွာအဝေးများအတွက် optimized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အပူစီမံခန့်ခွဲမှု - အသိဉာဏ်အပူစီမံခန့်ခွဲမှုကို အသုံးပြု. လျှပ်စစ်နှင့်မျိုးစပ်ယာဉ်များ၏အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ရန်, ဟိုက်ဘရစ်လျှပ်စစ်ကားများနှင့် Bosch ရဲ့အတွင်းလက်ျာအပူချိန် setting ။ ပူပြင်းခြင်းနှင့်ဘက်ထရီနှင့်ထောက်ပံ့ရေးများ၏ထိရောက်မှုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအပူချိန်အကွာအဝေးအတွင်းအလုပ်အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးမြှင့်, အတိအကျဖြန့်ဝေခြင်းကိုအအေး။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လေထုညစ်ညမ်းမှုတိုင်းတာသည့်စနစ် - မြို့များပိုကောင်းလေထုအရည်အသွေးကို:
Air ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘူတာကြီးများနှင့်စျေးကြီးတယ်, ကသာအနည်းငယ်တိကျသောအချက်များအတွက်လေထုအရည်အသွေးကိုတိုင်းတာသည်။ Bosch ရဲ့, ဖြစ်ပေါ်မြို့ထဲသို့တစ်ဦးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လမ်းအတွက်အသုံးချနိုင်ငယ် box ထဲက system ကိုတိုင်းတာခြင်းလေထုညစ်ညမ်းမှု။ ဤရွေ့ကားသေတ္တာများ, အမှုန်များနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်အဖြစ်အပူချိန်, ဖိအားနှင့်စိုထိုင်းဆမှာလည်းအမှန်တကယ်အချိန်တိုင်းတာသည်။ Bosch ရဲ့အဲဒီတိုင်းတာအပေါ်အခြေခံပြီးမြို့အသွားအလာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သုံးစွဲဖို့အတှကျအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးလေကြောင်းအရည်အသွေးကိုမြေပုံ, ဤမြေပုံကိုဖန်တီးသည်။
E-တောင်တော်သို့စက်ဘီး - စိန်ခေါ်မှုမြေပြင်အနေအထားနှင့်အတူနှစ်ဘီးတပ်ယာဉ်တစ်စီးကလွယ်ကူအောင်:
လျှပ်စစ်တောင်တော်သို့စက်ဘီး, လျှပ်စစ်စက်ဘီးစျေးကွက်၏လက်ရှိအင်အားအကောင်းဆုံးကြီးထွားလာအစိတ်အပိုင်း။ နယူး boschperformancel CX မောင်းနှင်မှုစနစ်ကပြိုင်ကားဆန်သောကိုင်တွယ်ပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပရိုဖိုင်အတွက် optimized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Idler စက်သီး, သဘာဝကပင်အကူအညီမပါဘဲအင်ဂျင်မောင်းများ၏ခံစားချက်တတ်၏။
အကူအညီများစနစ်များနှင့်အလိုအလျောက်မောင်းနှင် - Bosch ရဲ့ကားကိုမောင်းသွန်သင်
လုံခြုံမှု, ထိရောက်မှုနှင့်အသွားအလာစီးဆင်းမှု, အချိန် - အလိုအလျောက်မနက်ဖြန်ရဲ့ mobility ၏များစွာသောစိန်ခေါ်မှုများမှဖြေရှင်းချက်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ပေးသွားမှာပါသောအချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ Bosch ရဲ့, ကျယ်ပြန့်ဒရိုင်ဘာအကူအညီများစနစ်များအကွာအဝေးအဖြစ်အမြဲတစေဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစုစုကိုမြင့်မားခြင်းနှင့်အပြည့်အဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု-related စနစ်များ, အစိတ်အပိုင်းများကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများရှိခြင်း။
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ valet ယာဉ်ရပ်နား - မောင်းသူမဲ့မှအစိမ်းရောင်အလင်း parking:
Bosch ရဲ့နဲ့ကုမ္ပဏီ Daimler, စတုဂတ်အတွက် Mercedes-Benz ပြတိုက်၏ဝံပုလွေမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ valet ယာဉ်ရပ်နား။ ငါစမတ်ဖုန်း app ကိုဖွင့်ပေးခြင်း, ကားရပ်နား valet olanotono ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမောင်းသူမဲ့တရားဝင် (SAA အဆင့် 4) ယာဉ်ရပ်နား function ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးမမြင်ရတဲ့လက်ဖြင့်ပဲ့ထိန်းလျှင်အဖြစ်ကားများ, ပန်းခြံသူ့ဟာသူနေတဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုယာဉ်မောင်းမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့ကင်မရာ - image processing တွင် algorithms များနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူ:
တပ်ဦးကင်မရာ, image processing တွင် algorithms အတုထောက်လှမ်းရေးနည်းလမ်းများပေါင်းစပ်။ မိုးသည်းထန်စွာမြို့အသွားအလာအတွက်နည်းပညာ, အဘယ်သူမျှမရှင်းလင်းသောသို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ်များဖြတ်သန်းအတွက်ဖြည့်စွက်, လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်စက်ဘီးစီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖော်ထုတ်မယ်အားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်ကြသည်။ ဒီ feature ယာဉ်သတိပေးချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဘရိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ရေဒါအာရုံခံကိရိယာ - ရှုပ်ထွေးသောမောင်းနှင်မှုအခြေအနေများပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ sensor များ:
ပင်ပိုကောင်း Bosch ရဲ့ရေဒါအာရုံခံကိရိယာ၏နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်, ရာသီဥတုဆိုးရွားသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုအလင်းအခြေအနေများအတွက်ယာဉ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖမ်းယူ။ အမြင့်ထောက်လှမ်းအကွာအဝေး, ကျယ်ပြန့် aperture နှင့်မြင့်မားသော angular resolution ကို, အကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအရေးပေါ်ဘရိတ်စနစ်၏တစ်ဦးထက်ပိုယုံကြည်စိတ်ချရသောလမ်းအတွက်တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
ယာဉ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အနေအထားကိုအာရုံခံကိရိယာ - မော်တော်ယာဉ်များအတွက်တိကျသော positioning ကို:
မှန်ကန်စွာsensörünügelişယူဆောင်သည့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်၏အနေအထားကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကြောင်း Bosch ရဲ့ VMPS မော်တော်ယာဉ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရာထူး။ ဤသည်အာရုံခံကိရိယာကားမောင်းနေစဉ်လမ်းသွားအတွက်အတိအကျအနေအထားဆုံးဖြတ်ရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်များပေးပါသည်။ VMPS, ငါ၏ (GNSS) ကို အသုံးပြု. အချက်ပြလိုက်ခြင်း navigasyonsiste ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂြိုဟ်တုကနေဒေတာတွေကိုကပံ့ပိုးထားတဲ့စတီယာရင်ထောင့်နှင့်ဘီးမြန်နှုန်းအာရုံခံကိရိယာကနေလည်းတစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်ဝန်ဆောင်မှု။
networked မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို (Connectedhorizo) - ပိုပြီးတိကျတဲ့နှင့်ရက်စွဲအထိ:
Bosch ရဲ့ကွန်ယက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ယင်းမတိုင်မီယာဉ်၏ထိုကဲ့သို့သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်လမ်းဒါမှမဟုတ်ကွေး၏ထောင့်နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှု, အန္တရာယ်ရှိတဲ့အစက်အပြောက်, ပိုမိုတိကျမှန်ကန်အချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော networked မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း, ယာဉ်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုံးစံများကိုမြင့်မားစွာတိကျမှန်ကန်မြေပုံဒေတာအသုံးပြုသည်။
လျှပ်စစ်စတီယာရင်စနစ်များကို - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုဖို့အဓိကသော့ချက်:
ပါဝါစတီယာရင်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုသော့ချက်တဦး။ Bosch ရဲ့ထံမှလျှပ်စစ်ပါဝါစတီယာရင်စနစ်အမျိုးစုံ Backup တွေကိုမှတဆင့်နောက်ထပ်လုံခြုံရေးပေးပါသည်။ ခဲသမားရိုးကျ xnumx ရဲ့လျှပ်စစ်ပါဝါစတီယာရင် function ကိုတစ်ဦးအနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တတ်နိုင်အတွက်ပျက်ကွက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်၏အမှု၌ကိုတှေ့မွငျ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုသူများအကြားဆက်သွယ်ရေး Tools များ - Bosch ရဲ့mobiliteyekusursuzbağlanabilirlikဆောင်တတ်၏
ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့တိုးကားမောင်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူအန္တရာယ်အပြန်အလှန်လှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ် switching ကွန်ရက် mobility အတွက် tools တွေကိုမလိုအပ်ပါဘူး ... Bosch ရဲ့, လမ်းအသုံးပြုသူများကိုဘဝ။ စစ်ဆင်ရေးဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကမ်းလှမ်းoldukçabasitအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ထိုးထွင်းသိမြင်သောလူ့-စက် interface ကို (HMI) ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
3D မျက်နှာပြင် - နက်ရှိုင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူဒိုင်ခွက်အမြင်များ:
Bosch ရဲ့အသစ် 3D Screen, သွေးဆောင်သုံးရှုထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုယာဉ်ရဲ့ခရီးသည်ယာဉ်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဒရိုင်ဘာအားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ နောက်ကျော Going ထိုကဲ့သို့သောကင်မရာများအဖြစ်ယာဉ်မောင်းအကူအညီစနစ်များ, ၏ visualization ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူအတားအဆီးသို့မဟုတ် tools တွေကိုမှအကွာအဝေးအဖြစ် drivers, သတင်းအချက်အလက်။
Perfectlykeyless - သော့ချက်အစားစမတ်ဖုန်း:
Bosch ရဲ့ keyless access ကိုစနစ်, စမတ်ဖုန်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောက virtual switch ကိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။ အဆိုပါစနစ်အားအလိုအလျှောက်ကားသော့ဖွင့်ဖို့ဒရိုင်ဘာ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းအင်ဂျင် start ကို detect နှင့်ပြန်ကားတစ်စီး၏သော့ခတ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါအာရုံခံကိရိယာထဲတွင်နေရာကားထိုကဲ့သို့သောလက်ဗွေရာအဖြစ်, လုံခြုံထုံးစံ၌ကားနှင့်အတူစမတ်ဖုန်းကို detect နှင့်ကားတစ်စီးနှင့်အတူသာဖွင့်လှစ်။
Semiconductor - ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် mobility အုတ်မြစ်:
သူတို့ခေတ်မီမော်တော်ယာဉ်များမှာဘယ်မှာတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေမပါဘဲ, ကျန်ကြွင်းမယ်။ Bosch ရဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်ဦးဆောင် chip ကိုထောက်ပံ့သည်။ Bosch ရဲ့ချစ်ပ်, ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင် GPS စနစ် signal ကိုဖြတ်နှင့် navigation system ကိုယင်း၏မောင်းနှင်မှုအပြုအမူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆက်လက်ကူညီပေးသည်။ ဤရွေ့ကားချစ်ပ်မတော်တဆမှု၏အဖြစ်အပျက်ကလူတွေကိုကာကွယ်ရန်လျှပ်စစ်ကားများ၏တန်ခိုးကို turn off နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာအလုပ်လုပ်ဖို့နည်းလမ်းနှင့်အရေးပေါ်န်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ။
V2X ဆက်သွယ်ရေး - ဒေတာမော်တော်ယာဉ်များနှင့်၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြားလဲလှယ်: ကွန်ယက်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းနှင်မှုပေမယ့်မော်တော်ယာဉ်များကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အရာအားလုံး (V2X) မှကားသေး data တွေကိုဖလှယ်အခြေခံအဆောက်အအုံများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိပေ။ Bosch'unteknoloji ဆက်သွယ်မှုကနေလွတ်လပ်သော V2X စပ်ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်, က Wi-Fi နှင့်ဆယ်လူလာကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဤသည်မော်တော်ယာဉ်များအန္တရာယ်အခြေအနေများတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသတိပေးနိုငျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
onboard ကွန်ပျူတာ - အီလက်ထရောနစ်ဗိသုကာတစ်ဦးမျိုးဆက်သစ်:
ဆက်သွယ်မှုမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး, အလိုအလျောက်များနှင့်မော်တော်ယာဉ်အီလက်ထရွန်းနစ်တိုးမြှင့်ထပ်မံတိုးမြှင့်တောင်းဆိုနေပြီ။ လုံခြုံကွန်ပျူတာများ, ထိန်းချုပ်ယူနစ်နှင့်အလိုအလျောက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်များကို အသုံးပြု. တစ်အစွမ်းထက် powertrain ၌သူတို့ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖြစ်လူသိများ Bosch ရဲ့ကိရိယာများ။
မိုးတိမ်အတွက်ဘက်ထရီ - ဘက်ထရီအဘို့အပိုရှည်ဝန်ဆောင်မှုဘဝကို:
အသစ်သောမိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများ, Bosch ရဲ့လျှပ်စစ်ကားများအတွက်ဘက်ထရီ၏တစ်သက်တာပိုကောင်းစေပါတယ်။ အသိဉာဏ် software ကို functions များ, Real-time ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယာဉ်များ၏အနီးအနားနှင့်ဒေတာများပေါ်တွင် အခြေခံ. ဘက်ထရီများ၏အခြေအနေခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြန်နှုန်းမြင့်အားသွင်းနှင့်ပိုပြီးအားသွင်းသံသရာမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောဘက်ထရီအပေါ်ပေါ်ပေါက်သောစိတ်ဖိစီးမှုအချက်များအာရုံခံ။ ထိုကဲ့သို့သောဆဲလ်အိုမင်းအဖြစ်တန်ပြန်အစီအမံ, တွက်ချက်ရန်ဖြစ်စဉ်ကိုပြန်အားသွင်း optimized စုဆောင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးဆော့ဖ်ဝဲ, ။
ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လမ်းပြည်နယ်န်ဆောင်မှုများ - ကြိုတင်ခန့်မှန်း၏အလားအလာအန္တရာယ်များ:
မိုးရွာရွာ, ဆီးနှင်းနှင့်ရေခဲ, ဒါမှမဟုတ်ပွတ်တိုက်မှုလမ်းမျက်နှာပြင်ချုပ်ကိုင်ထား၏ကိန်းကိုပြောင်း။ လက်ရှိအခြေအနေများ၎င်းတို့၏မောင်းနှင်မှုအပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မည်သို့သင်ယူခြင်းသည်ရန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်, Bosch က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် cloud-based service ကိုလမ်းအခြေအနေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ မိုးလေဝသ, လမ်းမျက်နှာပြင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ယာဉ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောပွတ်တိုက်၏မျှော်မှန်းကိန်းအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်, ကွန်ယက်မော်တော်ယာဉ်များမှမိုဃ်းတိမ်ကနေတဆင့်စစ်မှန်တဲ့အချိန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။
ကင်မရာ၏အတွင်းပိုင်း - ပိုပြီးလုံခြုံရေးလေ့လာသူများအဘို့:
တိုတောင်းသောအိပ်စက်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှု, အာရုံပြံ့လှငျ့သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်အတွင်းပိုင်းအဖြစ်ရလဒ်များကိုမှဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါလျောက်ပတ်မေ့လျော့ထိုင်ခုံခါးပတ်ဆိုးရွားသောအခြေအနေများ, Bosch ရဲ့နည်းပညာကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြဿနာဖြစ်ထွက်လှည့်။ တစ်ခုတည်းနဲ့ multi-ကင်မရာစောင့်ကြည့်မှုစနစ်မရရှိနိုင် In-ကားတစ်စီး configurations အဖြစ် Bosch'unopsiyonel, စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအရေးပါအခြေအနေများကို detect နှင့်ယာဉ်မောင်းသတိပေးလိုက်သည်။
ဒီနေ့ရဲ့လမ်းရထားလိုင်းများကိုကြိုတင် 88 တစ်နှစ် 18 / 01 / 2012 နေစဉ်သမ္မတနိုင်ငံ၏လမ်းရထား Altepe နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူလမ်းပေါ်တွင်နာမည် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးငြင်းခုံမနေ့ကတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထုတ်ဖော်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ 108 နှစ်ပေါင်း Bursa 88 နှစ်အတွင်းလမ်းရထားများအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းလွန်ခဲ့တဲ့မော, ကယနေ့စီစဉ်ထားအတူတိုက်ဆိုင်ဟန်လွန်ခဲ့တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Recep Altepe မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအသစ်စင်တာကိုဖန်တီးရန်အစပိုင်းတွင်ခရိုနီရှင်းပြီ ... လိုင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဆုံးဖြတ်ချက်အသွားအလာဖို့လမ်းပိတ်ဖို့ရန်စဉ်အခါ, သမ္မတနိုင်ငံများ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရန်, single-ကားတစ်စီးပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလိုင်းအတွက်ကဒီမှာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော်ကြောင့် oldness မှအသစ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆွဲဆောင်ဖို့အဟောင်းလမ်းရထားကားအရောင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက် ... ရွေးချယ်ရာတွင်အခါလွမ်းဆွတ်လမ်းရထားကားများကိုယ်စားပေါ်ကဆိုသည်။ ဤကိစ္စတွင် ... Bursa အတွက် ...
Bosch ရဲ့အင်ဂျင်နီယာ GmbH သည် 28 / 12 / 2010 နေရပ်လိပ်စာ: ရောဘတ်-Bosch ရဲ့-Allee DE 1 - 74232 Abstatt E-Mail က: အင်တာနက်ကို beg.rail@de.bosch.co: ငါ http://www.bosch-engineering.co ဆက်သွယ်ရန်: Herr Sascha Niemz
Bosch ရဲ့ Rexroth 28 / 12 / 2010 နေရပ်လိပ်စာ: Partensteiner str ။ DE 23 - 97816 Lohr ပင်မဖုန်းပါ၏: + 49-9352 / 18-4763 ဖက်စ်: + 49-9352 / 40-4763 E-Mail က: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး @ boschrexroth အင်တာနက်ကို http: //www.boschrexroth ဆက်သွယ်ရန်အတွက်: Herr ။ ။ Sascha Niemz 3.2.30 3.2.41 tilt ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကိုအစိတ်အပိုင်းများ
Scharnier မှ Bosch ရဲ့ 28 / 12 / 2010 နေရပ်လိပ်စာ: Voltastraat NL 84 - 7006 RW Doetinchem ဖုန်းနံပါတ်: + 31-314 / 36 99 88 ဖက်စ်: + 31-314 / 34 16 45 E-Mail က: အင်တာနက်ကို welcome@boschscharniere.co: //www.boschscharniere: အကို http ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Herr Godfried Kaan
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Den Bosch အမျိုးအစား TBA 24000 72 လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းပြုပြင်ပျက်ယွင်းနေမော်တာပြုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ် 26 / 02 / 2013 သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်းကိုနူးညံ့ DE 24000 ပျက်ယွင်းနေမော်တာပြုပြင်၏ခေါငျး Bosch တီဘီ 72 အမျိုးအစား, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ရေးတာဝန်ရှိကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်-ဆာလောင်မွတ်သိပ်နူးညံ့-ထောက်ပံ့ရေးတင်ဒါxnumx.bölgအလုပ်ထွက်သယ်ဆောင်: Enver Timurbog Manager ကိုဖုန်းတင်ဒါမှ:7/ 02722137621 လေလံ Manager ကဖက်စ်: 4309 Ilan နေ့စွဲ: 02722141943 23.02.2013: 00: 00 လေလံနေ့စွဲ: 00 19.03.2013: 00: 00-00 / 15 သတ်မှတ်ချက်ကုန်ကျစရိတ်: တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှုန်း 30: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနုအကြောင်းအရာမှ: ကုန်စည်ဒိုင်ကုန်သွယ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 100 / 2013 မေးလ်: tcddihalekomisyonuafyo ရဲ့ @ tcdd.gov.t နူးညံ့အသိပေးစာ DE ပျက်ယွင်းနေမော်တာပြုပြင်ခေါငျးတီဘီ Bosch ၏ 19536 24000 အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, ပြုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ပြုပြင်ပြင်ပအလုပ်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ TCDD 72 ။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ:7/ 2013 အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေး: ...
ဖျက်သိမ်း den Bosch ရဲ့ရထား 12 / 07 / 2013 ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်ရန်မြို့ကိုမီးရထားဖွငျ့ဤသတင်းကိုသွားချင်တဲ့သူများ den Bosch ရဲ့ရထားဖျက်သိမ်းခြင်း den Bosh ။ ယနေ့တွင်မြို့ကိုမီးရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန်မီးရထားကုမ္ပဏီဖြင့်ကြေညာချက်အရသိရသည် NS; Den Bosch ရဲ့မြို့မှအားလုံးရထားဆက်သွယ်မှုယနေ့မွန်းတည့်ပြီးနောက်ရပ်တန့်လိမ့်မည်။ Tilburg နှင့်ဦးတည်ချက်အတွက် 12 အချိန်ဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်အကြာတွင်စတင်မည်သောမြို့အတွက် Endhov အလုပ်လုပ်နာရီ, ။ ဒါဟာသိသိသာသာပူးတွဲပြုပြင်ရှိပါလိမ့်မယ်ယင်းရထားလမ်းသည်ယနေ့, အသက်တမ်းတိုး NS အတွက်အလုပ်လုပ်ဆက်လက်ကြောင်းညွှန်ပြမွို့၌အချိန်ဖြစ်ပါသည်, သူသည်မြို့ရဲ့ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်လမ်းများဖျက်သိမ်းထို့ကြောင့်ဟုပြောသည်။ မကြာသေးမီကာလ၌မြို့မြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျန်ရှိနေသော ...
Bosch ရဲ့အတူကမ္ဘာကြီးကို Explore 16 / 04 / 2014 Bosch ရဲ့အတူကမ္ဘာကြီးကို Explore: Bosch ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု, "Bosch ရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားအတွေ့အကြုံ" သင်တန်းသားများကိုနာမတျောအ 16 နေ့စဉ်ခရီးအောက်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့သောကမ္ဘာကြီးကိုခရီးစဉ်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ ဒါဟာ Bosch ရဲ့ရဲ့တည်ရှိသောကြောင့်စီမံကိန်းများ, ပနားမား, ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရဲ့ရှန်ဟိုင်းနှင့်စင်္ကာပူသို့သွားရောက်အစက်အပြောက်ခရီးသွားလာသွားကြဖို့ဒီနွေရာသီလန်ဒန်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Applications ကို 14 မေလ 16 2014 ဧပြီလအကြားစတငျနှင့် www.experience.bosch.com.t လိပ်စာမှတဆင့်လက်ခံခဲ့သည်လိမ့်မည်။ နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်ပါဝင်နိူးပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်သောသူတို့အဘို့ဦးစားပေးရှေးခယျြမှု, ပထမဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်မှတ်ပုံတင်ရန်တစ်ခုချင်းစီကိုဦးတည်ရာနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုမီဒီယာ ...
Bosch ရဲ့ Rextorh 20 / 01 / 2019 drive ကိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၏လယ်ပြင်တွင် Bosch ရဲ့ Rexroth AG ကကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အထူးကုကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 1976 နှစ် Bosch ရဲ့ Rexroth Automation စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကတည်းက။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ Inc က စက်နှင့်စက်ရုံ၏ Rexroth drive ကိုအတူ client များအတွက်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. နှင့်အတူတူရကီအတွက် operating ကုမ္ပဏီများ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်သည်။ Bosch ရဲ့ Rexroth မိုဘိုင်း applications များ, စက်အင်ဂျင်နီယာနှင့်စက်ရုံပစ္စည်းကိရိယာများအလိုအလျောက်အဘို့သင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။
skier ရဲ့အနာဂတ်ကျော်တက် Bitliste 29 / 01 / 2015 ကမ္ဘာကြီးကို-class ကိုနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်းမှာအမျိုးသားရေးအသင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားနေ, နှင်းလျှောစီးအသက်အရွယ်515 အထိလေးတွေနှင့်အတူအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးစခန်း: အနာဂတ် Bitliste skiers မပေါက်ပါဘူး။ လူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အမျိုးသားရေးအသင်းဝင်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစကိတ်တောင်စောင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်,515 အားဖြင့် drop မှကလေးများကနေအထိအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးစခန်းနှင်းလျှောစီးအသက်အရွယ်မရွေးအားကစားပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု။ နှင်းလျှောစီးပြီးကလေးများအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်တပ်သို့တက်ရောက်လာကြသောလူငယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြေခံပညာရေးအားကစားပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု, နှင်းလျှောစီးကျောင်းမှတာဖြစ်ပါတယ်။515 နှင်းလျှောစီးနှင့်အတူပညာရေးနှင့်အသက်အရွယ်၏လယ်ပြင်တွင်နည်းပြ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်နှင်းလျှောစီး, Erhan Onur ဂူးလ်နှင့် Al-Aman Khan ကအတူပြောရလျှင် Bitlis ခုနှစ်တွင် ...
Denizli မှသည်အနာဂတ်၏ skiers ရောက်ရန် 22 / 02 / 2016 ဒါဟာအနာဂတ်၏ Denizli skiers ကနေကြီးထွားကြလိမ့်မည်: တောင်ပိုင်း Aegean ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Denizli အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး program ကိုအောအေဂျင်စီရဲ့အခြားရွေးချယ်စရာခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အဦများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး '' အပြာရောင် မှစ. White ကရန်, Denizli Bozdag '' စီမံကိန်းအားကန့်သတ်အဆောက်အဦနှင့်အတူနှင်းလျှောစီးပြီးယင်း 650 ကျောင်းသားများအားစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့ဝန်ရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူးအတွက် Tavas ၏ Denizli ဝန်၏အောက်ရှိ, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Tavas မြူနီစီပယ်နှင့်လူငယ်များအစည်းအရုံးန်ဆောင်မှုများနှင့်စီမံကိန်း '' အဖြူရောင် Denizli Bozdag မှအပြာကနေ '' မိတ်ဖက်များ၏အားကစားပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုမှာကောက်ယူ, Bozdag နှင်းလျှောစီးစင်တာစတင်ခဲ့သည်။ တောင်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအောက်မှာငွေကြေးထောက်ပံ့သောစီမံကိန်းနှင့်အတူ Alternative ခရီးသွားလုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အဦများဖွံ့ဖြိုးရေးခြင်းဖြင့် Aegean ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (GEKA), ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်အဆောက်အဦနှင့်အတူနှင်းလျှောစီးလိုသူကျောင်းသားများအားကစားtanıştırılıyဖြစ်ကြသည်။ Tavas ခရိုင် by ...
Bosch ရဲ့ mobilitey
ဒီနေ့ရဲ့လမ်းရထားလိုင်းများကိုကြိုတင် 88 တစ်နှစ်
Bosch ရဲ့ Rexroth
Scharnier မှ Bosch ရဲ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Den Bosch အမျိုးအစား TBA 24000 72 လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းပြုပြင်ပျက်ယွင်းနေမော်တာပြုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်
ဖျက်သိမ်း den Bosch ရဲ့ရထား
Bosch ရဲ့အတူကမ္ဘာကြီးကို Explore
Bosch ရဲ့ Rextorh
skier ရဲ့အနာဂတ်ကျော်တက် Bitliste
Denizli မှသည်အနာဂတ်၏ skiers ရောက်ရန်
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (318) ဇူလိုင်လ 2019 (636) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (831) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)